Toriteny Alahady 02-04-2017 – Ecar Sainte Anne Anjomakely
« IZAHO NO FANANGANANA SY FIAINANA »
Telo herinandro izay ny evanjely no nitarika antsika kristianina ho any amin’ny finoana mafy orina . Manamafy izany ity tranga niseho tao Betania,rehefa nindaosin’ny fahafatesana noho ny aretina I Lazara, andahin’I Marta sy Maria, naman’I Jesoa. Alohan’ny hidirantsika amin’ny alahadin’ny sampankazo izay vavahady hirosoana amin’ny herinandro masina dia misarika ny saintsika hanamafy orina ny finoantsika I Jesoa. Matetika mantsy rehefa sendran’ny fahasarotana isika no miha manalavitra an’Andriamanitra ka manadino tanteraka ny fahagagana sy ny valim-bavaka afaka tanterahiny hoantsika.
Ndao hanao fandinihan-tena eo am-pamakiana ity fintin’ny tantara tao Betania, tanànan’ny sakaizan’I Jesoa ity. Narary mafy mantsy I Lazara, sakaizan’i Jesoa. Tsy tafandalo tao Betania anefa ity zanak’Andriamanitra ity raha tsy efa nindaosin’ny fahafatesana ilay namany. Nalahelo mafy I Jesoa ary torak’izany ihany koa ireto anabavin’I Lazara dia tsy iza fa I Marta sy I Maria. “Raha taty ianao Tompo ny maty ny anadahiko”, hoy ny tarainan’izy mirahavavy.
Taratry ny fiainantsika amin’ny andavandro izany. Ankoatra ny mety ho fanadinoantsika an’Andriamanitra rehefa miaina sedra sy fitsapàna dia eo ihany koa ny fanerentsika Azy hamaly avy hatrany ny vavaka ataontsika. Tsy azo adinoina fa mpino mantsy I Marta sy I Maria, ary toa antsika ihany koa, saingy tsy ampy izany.
Azon’I Jesoa natao ny tonga avy hatrany raha vao nahare fa narary mafy ny namany, toa ireo nataony tamin’ilay jamba ka lasa nahiratra. Saingy mangataka antsika hanorim-paka ny finoantsika ny Ray. Raha tanteraka avokoa mantsy ny fangatahana ataontsika mety hikorontana ny tany aman-danitra. Mahalala ny fotoana sy ny toerana hanaovana izany tahaka ny niseho tamin’I Lazara izay efa voalevina, Izy araka izany.
“Vohay ny varavarana”, “Mivoaha ry Lazara”, fotoana fohy taorian’izay ihany dia nivaly ny vavak’ireo anabavin’I Lazara, teny am-pasana.
Noho izany, avelan’Andriamanitra hiaina ao anatin’ny fijaliana isika, tahaka ny nahazo an’I Marta sy I Maria, na dia tena sakaiza tian’I Jesoa aza. Ny fanadiovan’Andriamanitra ny finoantsika sy ny vavaka ataontsika no tanjona amin’izany satria samy manana ny finoany ka fomba iray hahafahantsika mandrefy izany ny fitsapàna.
Satria “Ny sasany ho any amin’ny fitsangananam-pahafatesana ary ny sasany kosa ho any amin’ny fitsanganam-piainana”. Ka lalana iray hahatongavantsika ho amin’izany ny fanaovantsika asa soa, ho fampanjakana ny fitiavana ireo namana.
Enganie ny fitsaganan’i Jesoa ho tafatsanga-kovelona ho any amin’ny finoantsika, hankahery antsika hanamafy izany ary hampiaina antsika ny fitiavana. Aoka hotanteraka amintsika izany, amin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen
Alahady 05/07/2015 : Toriteny
Alahady fahadimy amin’ny Karemy – 22/03/2015 – Toriteny
Alahady – 07/12/2014 – Toriteny